Latest M-Media News!
25. လကမ္ဘာသို့	-M-Media
#သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ	(07h ago)
24. တိုက်စစ်မှူး	-M-Media
#အာဖရိက	(08h ago)
23. လူမျိုးစွဲ၊	-M-Media
22. ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး	-M-Media
#အရှေ့အလယ်ပိုင်း	(10h ago)
21. အင်္ဂါနေ့မနက်	-M-Media
#အရှေ့အလယ်ပိုင်း	(15h ago)
20. ကုလ	-M-Media
#မြန်မာသတင်း	(16h ago)
ဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၁၈ M-Media – မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့မှာ မနေ့က မြေစာပုံ ပြိုကျမှုကြောင့် အနည်းဆုံး ၁၅ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၄၅ ဦးလောက် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ လုံးခင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး[Read More...]
19. ဂျေရုစလင်တွင် အစ္စရေးနှင့်ခြေစမ်းမည့် အစီအစဉ်ကို အာဂျင်တီးနား ဖျက်သိမ်း	-M-Media
#နည်းပညာ	(1d ago)
18. Malala Fund ၏ လက်တင်အမေရိက အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွင် Apple ပူးပေါင်း	-M-Media
#ကမ္ဘာ့မွတ်စလင် သတင်းများ	(1d ago)
ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၁၈ M-Media – ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင် မာလာလာ တည်ထောင်ထားတဲ့ Malala Fund ရဲ့ တောင်အမေရိက အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ Apple ကုမ္ပဏီက ဒီကနေ့မှာ ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ Malala[Read More...]
17. မြန်မာနိုင်ငံက	-M-Media
16. အင်္ဂါနေ့မနက် နိုင်ငံတကာသတင်းများ	-M-Media
#အရှေ့အလယ်ပိုင်း	(1d ago)
15. ပြည်တွင်းဖြစ် ခရုဇ်ဒုံးကျည်တစ်မျိုးကို ပါကစ္စတန် စမ်းသပ်အောင်မြင်	-M-Media
#နိုင်ငံတကာ	(1d ago)
14. သောကြာနေ့မနက် နိုင်ငံတကာသတင်းများ	-M-Media
#နိုင်ငံတကာ	(2d ago)
13. ဒုတိယမြောက် ငလျင်ဆိုင်ရာဖိုရမ် ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပ	-M-Media
#မြန်မာသတင်း	(2d ago)
ဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၈ M-Media – လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ဦးစီးကျင်းပတဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ငလျင်ဆိုင်ရာ ဖိုရမ်ကို ဒီကနေ့ ရန်ကုန်မြို့မှာ စတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ၂ ရက်တာကြာမြင့်မယ့် ဒီဖိုရမ်မှာ ငလျင်ဆိုင်ရာ[Read More...]
12. ဘော့စနီးယား လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း (မြန်မာစာတမ်းထိုး)	-M-Media
#ဥရောပ	(3d ago)
ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၁၈ M-Media – ယူဂိုဆလားဗီယား ပြိုကွဲပြီးတဲ့နောက် ဆာ့ဘ်လူမျိုးကြီးဝါဒီတွေဟာ ဘော့စနီးယားက ဘော့စနီးယက်တွေ (ဘော့စနီးယား မွတ်စလင်တွေ)နဲ့ ခရိုအက်လူမျိုးတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုဟာ ၂၃ နှစ်တင်းတင်း ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘော့စနီးယားစစ်ပွဲနဲ့[Read More...]
11. ပထမဆုံး	-M-Media
#နိုင်ငံတကာ	(3d ago)
10. အမေရိကန်၏	-M-Media
9. ကြာသာပတေးနေ့မနက်	-M-Media
8. ဘော့စ်နီးယားတွင် ဆာ့ဘ်တို့၏ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု ၂၃ နှစ်ပြည့်ပြီ	-M-Media
#ဥရောပ	(4d ago)
ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၀၁၈ M-Media – ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွေမှာ ဆာ့ဘ်တွေရဲ့ မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်မှုကို ခံခဲ့ရတဲ့ ဘော့စနီးယား မွတ်စလင်တွေထဲက ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သူ ၃၅ ဦးအတွက် ဒီကနေ့မှာ ဈပနာအခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့ဟာ[Read More...]
7. စနေနေ့မနက်	-M-Media
#နိုင်ငံတကာ	(4d ago)
6. ဥရောပကို ရုရှားရန်မှ ကာကွယ်ပေးရမှု မထိုက်တန်ဟု ထရမ့် ထုတ်ပြော	-M-Media
#အမေရိက	(4d ago)
ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၀၁၈ M-Media – ရုရှားထံကနေ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွေ ၀ယ်ယူထားတာကြောင့် ဂျာမနီဟာ ရုရှားရဲ့ ထောင်ချောက်ထဲ မိနေတယ်လို့ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာ စတင်မယ့် နေတိုးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်[Read More...]
5. ဘန်ကောက်ရှိသံရုံးကို	-M-Media
#နိုင်ငံတကာ	(5d ago)
4. ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က	-M-Media
#ပြည်တွင်း	(6d ago)
3. တရုတ်-အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေးတင်းမာမှု အဆုံးသတ်	-M-Media
#နိုင်ငံတကာ	(6d ago)
2. မလေးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းထံမှ	-M-Media
1. မြန်မာနှင့် ကမ္ဘောဒီယားလုပ်သားများ လူကုန်ကူးခံရမှုကို ထိုင်းက မတားဆီးနိုင်ဟု HRW ပြော	-M-Media
#အာရှ-ပဖိဖိတ်	(6d ago)